Imveliso yegalari yabenzi kunye nabanikezeli-Ixabiso eliphantsi lemveliso yefowuni
Iimveliso ze-Aluminium alloy die-casting zisetyenziswa ikakhulu kwi-elektroniki, iimoto, iimoto, izixhobo zasekhaya kunye namanye amashishini onxibelelwano. Ezinye izinto ezikumgangatho ophezulu, ukuchaneka okuphezulu, ubunzima beemveliso zealuminiyam ezisetyenzisiweyo zikwasebenza kwimizi-mveliso eneemfuno eziphezulu ezinje ngeenqwelo-moya ezinkulu kunye neenqanawa. Ukusetyenziswa okuphambili kusekho kwiindawo zezixhobo ezithile.
I-Brass ingxubevange eyenziwe ngobhedu kunye ne-zinc, kwaye yinto efanelekileyo yokuvelisa izinto ezenziwe ngomatshini (kubandakanya iinxalenye zomgunyathi). I-die casting ishunqulelwe njengokufaka, eyindlela yokuphosa apho ulwelo olutyhidiweyo luthululelwa kwigumbi lokushicilela, umngxuma wokubumba kwesinyithi uzaliswe ngesantya esiphezulu, kwaye ulwelo olungumxube luqina phantsi koxinzelelo lokwenza ukulahlwa.